३ सय किलोको शरीर भएपछि सम्भोगको के स्वाद ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपालका ११ माओवादी केन्द्रिय नेतालाई भारतमा ६ बर्ष कैद फैसला
इन्द्रजात्राको एक झलक (फोटो फिचर) →
३ सय किलोको शरीर भएपछि सम्भोगको के स्वाद ?
अमेरिकाकी पाउलिन पोटर विश्वकै सबैभन्दा बढि तौल भएकी महिला हुन् । क्यालिफोर्नियाको साक्रामेन्टोमा बस्ने ४७ वर्षकी पाउलिनको तौल ७ सय पउण्ड वा झण्डै ३ सय १८ किलो छ ।
विश्वको सबैभन्दा भारी महिला पाउलिन लाई गिनिज बुकमा नाम लेखाउँदा जति खुसी छ उनलाई बढि तौलका कारण भोग्नुपरेको पीडाका कारण उत्तिनै हैरानी भएको छ । मोटोपनका कारण जिवनका हरेक आनन्दबाट बञ्चित भएको भन्दै पाउलिनले आफ्नो तौल घटाउने मनस्थितिमा रहेको बताएकी छिन् ।
धेरै पुरुषले पाउलिनलाई यौन देवी भनेर सोच्दाहुन् र उनको दैनिक यौनजिवन निकै रोमाञ्चक छ भनेर सोच्दाहुन् । तर यौन आनन्द लिनुको कुरा त परै जाओस् उनलाई बिछौनामा सुत्न समेत गाह्रो हुन्छ ।
यस्तो कठिनाइका कारण पाउलिनले आफ्नो तौल घटाएर २ सय पउण्डमा झार्ने चाहना व्यक्त गरेकी छिन् । वंशाणुगत गुण र बाल्यकालमा बढि खाना खाएका कारण आफु मोटाएको उनको भनाइ छ । उनकी आमा समेत ४ सय पउण्ड र बुवा ६ सय पउण्ड तौलका थिए । पाउलिनका अरु ८ जना दाजुभाइ दिदीबहिनीको तौल पनि ३ सय पउण्ड भन्दा बढि भएको बताइएको छ ।
सबै कुराको लागि छोराको सहायता लिनु परेको र आफुले आफ्नो मोजा समेत लगाउन नसक्ने भएपछि पाउलिनलाई दु्ब्लाउनु पर्छ भन्ने लागेको रहेछ । तर हरेक घण्टामा खानैपर्ने उनको बानीले गर्दा नदुब्लाइने हो की भन्ने चिन्ता परेको छ । आफु दुब्लाएर २ सय पउण्ड भएमा स्वर्गकै अनुभुति हुने उनको कल्पना छ । यदि त्यसो भयो भने म नाच्न सक्छु , हिडेर रंगशालामा गइ बेसबल खेल हेर्नसक्छु र छोरासित बाटोमा हिड्नसक्छु, उनी भन्छिन् ।
तौल कम गर्ने उपचारका लागि डाक्टरको खोजीमा छिन् पाउलिन् । तर अझै सहयोगी डाक्टर भेटेकी छैनिन् । पाउलिनलाई अनलाइनमार्फत भने शुभेच्छुकहरुले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । जसका कारण उनको अजंगको सरीरलाई आहारा पुगेको छ ।